Iimpawu zeKhadinali: Ngoobani kwaye Ithetha ukuthini le Modyuli? - Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi
Kwi-Astrology, i-Aries, uMhlaza, iLibra, kunye neCapricorn zihlelwa njengeempawu zeKhadinali. Igama elithi ‘Cardinal’ lisuka kwiLatin kwaye lithetha ‘ukubaluleka’. Le miqondiso mine yokuvumisa ngeenkwenkwezi igqalwa njengebalulekileyo kuba nganye iphawula ukuba iLanga lingena kwinto entsha yezodiac, ngaloo ndlela iqalisa ixesha elitsha lonyaka. Umvumisi ngeenkwenkwezi u-S T utyhila intsingiselo yokwenyani yale nto kunye nendlela ebuchaphazela ngayo ubuntu bakho.
Iimpawu zeCardinal ngabathathi bamanyathelo abazimiseleyo abazikhuthazayo.
Intsingiselo yomqondiso wekhadinali ityhiliwe
Yintoni eyenza le miqondiso ikhetheke?
Ngaba zihambelana kakuhle zothando?
Kuthetha ukuthini ukuba ngumqondiso weKhadinali?
Iimpawu zeKhadinali zimela iziqalo ezintsha, ubunkokeli kunye nokujika amagqabi amatsha, yiyo loo nto zonke zazisa amaxesha onyaka amatsha (entwasahlobo, ehlotyeni, ekwindla nasebusika). Ngamnye kule miqondiso ungowohlukileyo into yezodiac , kodwa imiqondiso iphenjelelwa njani lolu phawu lunamandla?
Abane iimpawu zodiac ezinxulumene nolu phawu banakho ukunyanzelisa utshintsho olukhulu ukuphucula umgangatho wobomi babo.
> Funda ngomnye iindlela zokuvumisa ngeenkwenkwezi <
Lithetha ukuthini elithi 'ikhadinali' kwi-Aries: Uphawu loMlilo olwazisa i-equinox yasentwasahlobo
Ariesiphambili kwizodiac, yiyo loo nto abantu bomthonyama benza iinkokeli ezibalaseleyo kuzo zonke iinkalo zobomi. Amandla abo anamandla angoyikisa, kodwa aqinisekisa iziphumo eziqaqambileyo. Kuthetha ukuba xa bejongene neengxaki, bangena kwaye bazenzele indlela entsha.
Kuthekani ngoMhlaza? Uphawu lokuqala lwaManzi lwenza indlela ye-solstice yasehlotyeni
Xa ilanga lingena Umhlaza inkwenkwezi, iphawula ukuqala kwexesha lokuphumelela kunye nombono. Olu phawu lunxulunyaniswa neemvakalelo kunye nokuba sempilweni ngenxa yento yamanzi. Umgangatho obalaseleyo usikelela aba bantu bomthonyama ngovelwano nolwazelelelo olunzulu nangakumbi. Ikwabakhuthaza ukuba bazingise phezu kwazo nje iingxaki.
Kwaye uLibra? Intshayelelo yophawu loMoya kunye nomqalisi we-equinox ekwindla
Kwi Iponti i Umgangatho weCardinal uvela ngenxa yobulukhuni babo. Nangona olu phawu lusaziwa ngokuba mathidala, xa aba bantu bomthonyama besenza isigqibo, akukho nto inokubatshintsha. Lo mgangatho uyabasikelela ngokuqina kwaye uqinisekisa ukuba abantu baseLibra banokulwa nekona yabo kwaye bakhusele imibono yabo.
Kuthekani ngeCapricorn? Uphawu lokuqala loMhlaba oluqalisa i-solstice yasebusika
Lo mgangatho unamandla ulandela ngokwesiko dogged Capricorn bomthonyama nge isipho sokuziqhelanisa. UCapricorn ngokwesiko unamathela kwimipu yabo, kodwa olu phawu lukhethekileyo luthetha ukuba banokubona umfanekiso omkhulu kwaye benze ukhetho olungcono. Ukuguquguquka kwabo okuxutywe kunye neetalente zabo zokuhlalutya kubanika umda ngaphezu kwabanye abantu.
Izazi ngeenkwenkwezi zika-S T:
Iimpawu zeCardinal zisichaphazela ngeendlela ezahlukeneyo kwiimpawu zethu zelanga. Impembelelo yabo ifikelela kuzo zonke iinkalo zobomi bethu, kubandakanywa ubudlelwane kunye nemisebenzi. Abantu bomthonyama bolu phawu bahlala bekhetha ukulwa ubudlelwane babo kwaye bafuna ukuqinisekisa ukuba uthando lwabo luhlala lutyatyambile. Xa kuziwa kwimisebenzi yabo, bafuna ukufikelela phezulu kwaye bathande ukuthatha imisebenzi enzima ngaphezu kwakhe nabani na.
Ziziphi iimpawu ezi-3 eziphambili zeempawu zeKhadinali?
1) Basebenza nzima
I-Aries, uMhlaza, iLibra, kunye neCapricorn bonke bangabantu abasebenza nzima abangaze bayeke ukuyekelela. Umdla wabo kunye nokuzimisela kwabo kubaqhubela phambili kwaye ubanike amandla okoyisa eyona miqobo inzima. Aba bantu bomthonyama basoloko bengabokugqibela ukuphuma eofisini.
2) Amandla anempembelelo
Zigcwele iimpawu ezinamandla nezikhuthazayo ezibanceda bafumane abantu kwicala. Isimo sabo sengqondo esihle siyaqinisekisa ukuba bathandwa kakhulu kwaye baxatyiswa ngoontanga babo. Aba bantu bahlala benendlela enamagama kwaye bazizithethi ezimangalisayo, okuthetha ukuba bahlala befumana indlela yabo.
3) Bakrelekrele kakhulu
Umgangatho weKhadinali wenza abantu ucazululo oluthe chatha kwaye kaninzi lunengqiqo ngaphezu koontanga babo. Bagqwesa kwimisebenzi efuna ukugxininiswa okukhulu kunye nokugxila. Oku kukwadibana nento yokuba bayakuthanda ukuphumelela nabo. Njengabaqalisi, bavakalelwa kukuba kufuneka babeke umgangatho ophezulu.
Ngaba iimpawu zeKhadinali ziyahambelana nomntu ngamnye ngothando kunye nobuhlobo? — Ubukhulu becala azihambelani
Abomthonyama bale miqondiso bangoovulindlela abanobuntu abomeleleyo ngokulinganayo. Xa kufikwa kubo ukuhambelana kweZodiac , banokuthi babethe iintloko kubudlelwane kwaye bachithe ixesha labo bexambulisana. Isidingo sabo sokuba ngabaphambili kwisenzo someleza ingcamango yokuba bayalawula, abaguquki kwaye bacela umngeni.
Ezi zibonakaliso zifaneleka ngakumbi iimpawu eziguquguqukayo okanye iimpawu ezimiselweyo .
Apha ngezantsi kukho imidibaniso yeyona miqondiso yokuvumisa ngeenkwenkwezi efanelekileyo:
Leo kwaye Sagittarius
Virgo kwaye Taurus
Iponti kwaye Gemini
I-Scorpio kwaye Umhlaza
Sagittarius kwaye Aries
Capricorn kwaye Taurus
Aquarius kwaye Gemini
IiPisces kwaye I-Scorpio
>>> Dive nzulu kwihlabathi lokuvumisa ngeenkwenkwezi ngokubala yakho uphawu olunyukayo .
* Umthombo woncwadi: Ekuphela kweNcwadi yeNkwenkwezi onokuze uyifune, uMbhali; Joanna Martine Woolfolk, Yapapashwa ngo-2012 kwaye iyafumaneka apha: IAmazon ekuphela kweNcwadi yeNkwenkwezi oya kuze uyifune
I-Otter nguMoya wesilwanyana sase-Aquarius; Fumanisa Oko Ikufanisayo
23:23 Iyure yesibuko: Ingelosi yakho enguMgcini iKhanya uBomi bakho
Ukuhambelana kweLibra kunye neSagittarius: ♥ Olu luQhagamshelwano olunye olomeleleyo!
ISiko lokuTshintsha amandla
Ngoobani ezona zibonakaliso zi-3 zeZodiac ezininzi?
IHoroscope yaseTshayina ngo-2021: Ngoobani abona miqondiso mi-3 banethamsanqa?
I-Scorpio Horoscope ngo-2021: Ixesha lokuzibeka kwakhona
Ufunda kwaye utolike njani iTarot yomnqamlezo
U-Emperor: Yamkela Ubulumko Obunikelwayo
Siyintoni Isilwanyana Sasekhaya Esigqibeleleyo Kuphawu ngalunye lweZodiac?
Uzifunda njani iiPalms: Gcoba obu Bugcisa kunye nesiKhokelo sethu kwaye utolike ikamva lakho
Ezi zibonakaliso ze-Zodiac ze-5 ziwela ngaphandle kothando kwiRekhodi yeRekhodi!
Amakhandlela eMiyalezo akuthumela ngamadangatye awo
Indlela Ukuzalwa Ngaphantsi kweGemini Ukunyuka Kuchaphazela ubuntu bakho